कसको थियो त्यो सर्टको टुक्रा ? दुई बर्षसम्म आएर परिक्षणको रिपोर्ट – हाम्रो देश
कसको थियो त्यो सर्टको टुक्रा ? दुई बर्षसम्म आएर परिक्षणको रिपोर्ट
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले निर्मला हत्या अनुसन्धानले थप पूर्णता पाउने दाबी गरे। उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि नै अदालतमा मुद्दा चलेको थियो। उनीहरूले सफाइ पाएका छन्। अब ती अनुसन्धान अधिकृतकै सहयोगमा थप अनुसन्धानअघि बढ्नेछ।’ घटना अनुसन्धनका लागि अहिले पनि सीआइबीको टोली कञ्चनपुरमै छ। घटना स्थलमा भेटिएको सर्टको टुक्राको परीक्षण प्रक्रियामै रहेको उनले बताएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।